Ma u qalantaa iibsan aamusan a, fanless PC? - Rule News
Ma u qalantaa iibsan aamusan a, fanless PC?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Ma u qalantaa iibsan aamusan a, fanless PC?” waxaa qoray Jack Schofield, waayo theguardian.com on 19 November Thursday 2015 09.12 UTC
Ma kumbiyuutarada fanless hadda iibsi macquul ah? Waxaan samayn badan oo lagu qoro dhawaaqa iyo fikradda ah PC a dhab aamusan yahay mid aad u soo jiidasho leh. Peter
tabo cusub Recent suuqa PC ayaa loo soocay in ay soo saara kumbiyuutarada fanless jaban, in kastoo aan si dhab ah goolka ahaa. Ahmiyada ahaa on saara laptops khafiif ah iyo kiniiniyada, Laakiinse kuwanu waxay leeyihiin dhibaato weyn soo guraysay kulayl. Intel ay xakameeyeen dhibaatadan iyadoo si tartiib tartiib ah hoos u dhigidda xaddiga awood chips ay ku baabbi'iyee. Haddaba iyagu ma ay heli sida kulul, ay u baahan yihiin wax ka yar taageerayaasha.
Tusaale ahaan, processor a desktop si dhakhso ah sida Core Intel ka i7-4960X leedahay TDP (awood design kaamerada) of 130W, oo kulul yahay. Laptops loo isticmaalaa in lagu qabto 45W ama 35W Processor, taas oo u dhacay si 15W in 17W for mashiinada khafiif ah. Core M duwan Intel ayaa hoos ugu dhaadhacay 4.5W keenay in. Maanta, xataa chips cheap ku salaysan Atom Intel (inta badan Pentium ama Celeron tilmaamay) ordi at 6-10W.
Waxaa jira cillado. Marka chips heli kulul, waxqabadkooda in la ceejiyey, ama ay wadajir hoos u xidhay. Tani waa wanaagsan ugu dadaalaan go'aysa sida processing erayga iyo dhirta web. Si kastaba ha ahaatee, chips, kuwanu ma ku haboon yahay shaqooyinka processing gaaray sida tafatirka video iyo ciyaaraha, oo waxay ku dhibtoon karo qodan audio iyo tafatirka.
Sidee badan oo taageerayaasha?
A PC desktop awood yeelan karaan saddex ama in ka badan taageerayaasha. sahayda processor iyo Awoodda yeelan doonaan taageerayaasha iyaga u gaar ah, oo sidaas soomi doonaan kaararka garaafyada la GPUs (naqshadeynta unugyada processing). Mararka qaarkood, Taageerayaasha kiis gaar ah wareejin doono hawada si ay u sii drives disk iyo qaybo kale oo macquul ah oo qaboow.
Dabcan, laptops khafiif ah iyo kiniiniyada ka bateriga ordi, si aanay u baahan Koronto gudaha. Mana ay leeyihiin kaarka muuqaallo kale oo kala duwan: sida caadiga ah waxay leeyihiin GPUs dhexgeliyey processor ah, sida in "Intel Integrated Graphics".
Haddii aadan u baahan tahay awood badan, ka dibna waxaa jira badan oo yar yar, Kumbiyuutarada raqiis ah in ay isticmaalaan farsamooyinka la mid ah sida laptops khafiif ah. Waxay yihiin labada fanless, ama taageerayaashooda ay yihiin ku dhowaad noiseless, marka laga reebo processor waxaa adag kexeeyey.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay qaab ciyaareed heer sare ah ee hawlaha sida tafatirka video ama ciyaaraha halis ah, ka dibna waxa ay weli caqabad ku ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay korontada fanless ah iyo habab dheeraad ah oo cusub si ay u qaboojinta. Kuwaas waxaa ka mid tuubooyinka kulaylka - Kuwaas oo sii kordhaysa caadi ah in laptops khafiif ah - iyo qaboojinta mararka dareere.
Mini kumbiyuutarada iyo nettops
Haddii aad rabto in aad wax yar oo raqiis ah, waxaa jira ogaaaday caadiga ah ee doorashada: Boogaadin "PC mini"On Amazon.co.uk helo in ka badan kun natiijooyinka. Raadinta "PC nettop"Helaa dheeraad ah maamuli 34 natiijooyinka, sababtoo ah xilli ciyaareedkan ayaa inta badan hoos u soo baxay oo naga mid ah. mashiinada oo dhan kuwanu ma fanless, laakiin inta badan waa aamusnaan ordi haddii aan buux.
Dadka sida caadiga ah ku lifaaq nidaamyadan in sets TV flat-screen ay: ay tahay wanaagsan Streaming video, -qabsi adeegyada TV, iyo Kombuyuutarada fudud. Waxay sidoo kale ordi karaan Spectrum, Mame iyo emulators kale ciyaarta.
Dhamaadka hooseeyo, waxaa jira nidaamyo raqiis ah sida fanless ah Voyo quruxsan Mini PC. Waxa uu leeyahay 1.33GHz a Intel Atom Z3735F, 2GB ee xasuusta iyo 64GB of eMMC kaydinta chip oo dekedda 4K HDMI ah oo kaliya £ 89,99. Waa wax badan Creech la mid ah sida heerka-galo 10Oo laptop Windows ama 2-in-1, laakiin aan ku keyboard iyo screen. Waxaa ay maamushaa oo ah 32-bit Windows 8.1With Bing (ineey version xorta ah), laakiin helo hagaajinta lacag la'aan ah in Windows 10.
Sumvision ee Duufaan waa ka duwan oo ka wanaagsan u yaqaan oo leh faahfaahinta la mid ah £ 98,50. The gigabayt Brix kala duwan sidoo kale waa inay eegtaa waxay ku kacaya.
Haddii aad rabto in aad wax awood badan, waxaa jira kala duwan Eggsnow ee fanless, Kumbiyuutarada mini aluminium. Kuwaas waxaa ka mid Core i3-4010U ama Core i5-4200U versions la 4GB ee xasuusta iyo 64GB SSD ah £ 212,99 oo £ 248,99 siday u kala horreeyaan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa ay qaadi karaan si ay 16GB xasuusta, ilaa 256GB SSDs, iyo ilaa 1.5TB drives adag. Waxaad ka iibsan kari lahaa nidaamka i3 saldhig Core dhan £ 156,99 oo ku haboon tahay xusuustaada iyo SSD.
The daydo Eggsnow la Apple ee tartamaan Mac Mini, oo uu bilaabo at £ 399 nidaamka Core ah i5 la 4GB ee xasuusta iyo drive adag 500GB, oo dushiisa ka £ 799 ka mid ah la 8GB iyo drive 1TB a (ama £ 1.759 oo la casriyeeyay oo dhan). Si kastaba ha ahaatee, dambayn 2014 Mac Mini ayaa soldered-in xusuusta iyo waxa u sabab for update ah.
Dhisidda kumbiyuutarada xasilloon in ay tahay in lug qaybaha gaarka ah loo isticmaalo, sida Koronto fanless iyo qaboojinta dareere, daray Esplanaden for qoqobada drives, iyo bixinta fiiro gaar ah u maritaanka hawadu ay mari kiiska. waxaan u qaadan Chillblast weli ma qaar ka mid ah tani. Si kastaba ha ahaatee, wax sahlan maanta, maxaa yeelay shirkadaha bilaabi kartaa kiisas barebones la mid ah Shuttle iyo motherboards ITX yar, ama kaliya u isticmaali yar a Intel NUC (Unit Next ee barashada Kombiyuutarka).
NUC sida caadiga ah waxaa ka mid ah heatsink weyn oo taageere yar, sidaa darteed waxaan ku filan ma lahaa version off-the-shelf ah inay aamusaan. Si kastaba ha ahaatee, Shirkadaha qaar ka mid ah ayaa loogu talagalay xaaladaha NUC in, in nuxurka, shaqeeyaan saxanka kulaylka sida badan. Sida iska cad, ma waxaad ku ordi lahaa hal meel ku kooban, laakiin xaaladaha caadiga ah, waxay radiate karo kulaylka ku filan in ay sii joogaan gudaha TDP ah.
Deggan PC ee UltraNUC waa tusaale, nidaamka la dhisay-in-Si UK. The UltraNUC Atom version bilaabantaa £ 325, halka Aabeel cased UltraNUC Pro fanless bilaabantaa £ 595. PC Deggan sidoo kale bixisaa kumbiyuutarada kale oo badan oo aamusan ama meel degan, Xarumaha warbaahinta iyo hababka madadaalada, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad ka heli wax adiga kugu habboon wanaagsan.
Aleutia ee R50 Fanless - "Xardhan iyo gurato UK" - waa a kala duwanaansho adag laakiin ugeeyaan-raadinaya NUC. Si kastaba ha ahaatee, waxa run ahaantii loogu talagalay isticmaalka warshadaha iyo ganacsiga. heerka R50 An la i3 Core a, 4GB ee xasuusta iyo 60GB SSD kharash £ 599. Aleutia sidoo kale iibiya nettop T1 "aEco PC"La J1800 a Celeron iyo 2GB Xasuus £ 349, ama la 4GB, a 120GB SSD iyo Microsoft Windows dhan £ 499. PC Green Tiny waa qeybiyaha kale.
In dhammaan kiisaska kor ku xusan, double-jeeg si loo arko haddii qiimaha ku jira nuqul ka mid ah Windows. Inta badan samayn, laakiin qaar ka mid ah kumbiyuutarada mini waxaa loo iibiyey in aan nidaamka qalliinka ah oo loogu talagalay dadka doonaya in ay u ordaan Linux.
erayada la soo dhaafay
Inta badan desktops casriga hadda dagan u ordi, marka laga reebo carabka ku adkeeyay, iyo dhaqankan dhinaca Processor Atom low-TDP iyo SSDs waxaa iyaga samaynta xataa aamusan. (Waxaad ka hubin kartaa TDPs iyo bartilmaameedyo ee chips kala duwan ee Notebookcheck ee Isbarbar dhigga ee Mobile Processor.)
The su'aalo ah ee aad hadda leedahay in aad ka jawaabto yihiin (a) intee ka xoog samayn aad u baahan tahay, iyo (b) sida badan waxaa aad u diyaarisay inaad bixiso aamusnaan?
Haddii aad rabto in aad ka dhigi cajalado qolka la mid ah sida aad PC, ku haay maanka in a mouse-wheel ka dhigi karaa qaylada magcaabo ah - haa, Waxaan la qabtay baxay by in - iyo isticmaalka keyboard malaha waa out of su'aasha. Waxaa jira jeer marka la taabto-screen leeyahay faa'iidooyinka ah isagoo aamusan.
Ma helay su'aal kale Jack? Waxaa email Ask.Jack@theguardian.com
33569	0 Qodobka, Weydii Jack, Kumbiyuutar, Features, Jack Schofield
← Post Previous Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, Isis u eg dhidib →